Saika hividy Discord | i Microsoft Androidsis
Saika hividy Discord amin'ny vidiny 10.000 miliara dolara i Microsoft
Mety hahavariana izany Saika hahazo Discord i Microsoft, ny fampiharana fandefasan-kafatra natokana ho an'ny filalaovana (na dia tena mety tsara amin'ny tanjona hafa aza izy tato ho ato), mitentina 10.000 miliara dolara araka ny natoron'i Bloomberg.
Fampiharana chat izay afaka nanala ny toeran'ny sasany aza noho ny fahombiazany ary noho ny maha mora azy dia mankafy ireo fiasa izay ny fampiharana hafa toa ny Discord dia mandalo ilay famandrihana voaloa.
1 Voalohany indrindra, inona ny atao hoe Discord?
2 Microsoft dia mandeha amin'ny Discord amin'ny vola 10.000 miliara dolara
Voalohany indrindra, inona ny atao hoe Discord?
Ho an'ilay izay tsy zatra milalao lalao vitsivitsy amin'ny lalao an-tserasera ianao izay andraisanao anjara amin'ny fiaraha-monina amin'ny Gamers, na tsy manana mpiara-miasa aminy izay hanatevin-daharana lalao handefasana sary, fika, fampianarana na fanaovana GIF na horonantsary tsotra fotsiny mba hialana voly, azo antoka fa vahiny tokoa i Discord
Fa eny Microsoft dia efa handatsaka 10.000 miliara dolaraTsy natao ho an'ny tsy misy izany, fa satria miatrika fampiharana lehibe izahay ary satria manana vondron'olona mpampiasa midadasika manerana ny planeta.
Discord dia teraka ho toeram-pivoriana ho an'ireo mpilalao lalao video taona vitsivitsy lasa izay raha ny fomba tokana hampivondronana ireo mpilalao ao amin'ny foko iray, ohatra, dia tamin'ny alàlan'ny forum (forum) na ireo fampiharana feo toa ny TeamServer 15 taona lasa izay.
Izany tsy fahampian'ny tsy fisian'ny fampiharana natokana ho an'ny fandefasana hafatra ho an'ny lalao izany dia nahatonga azy io ho malaza amin'ny fotoana fohy. Tamin'ny alalànay no nampahafantaranay azy tamin'ny 2016fa ny fandefasana ampahibemaso dia tamin'ny 2015. Ka miresaka momba ny rindrambaiko iray natomboka 6 taona lasa tamin'ny 2021 isika dia afaka amidy amina vola be io.
tsy mitovy hevitra, Ankoatry ny fanolorana resadresaka am-peo VoIP, horonan-tsary sy fifampiresahana an-tsoratra, dia miteraka traikefa lehibe koa hamoronana fiarahamonina an-tserasera ny lohahevitra rehetra noho ireo vondrona sy ireo fiasa rehetra atolotray azy. Raha ny marina, ny fananana rindranasa isaky ny fitaovana finday na PC ahafahantsika mamorona efitrano fandraisam-peo na horonan-tsary ary ahafahan'ny rehetra manatevin-daharana amin'ny fomba tena tsotra, dia ampahany tamin'ny fahombiazany ihany koa.
Microsoft dia mandeha amin'ny Discord amin'ny vola 10.000 miliara dolara
Ora vitsy lasa izay dia fantatsika izany Microsoft dia efa niresaka momba ny Discord Inc. 10.000 tapitrisa dolara mahery. Tsy vao sambany no nitiavan'ireo lehibe sasany i Discord.
Ny lanjan'i Discord ho an'ny orinasa toa an'i Microsoft dia noho ny zava-misy mandritra ny areti-mandringana, ankoatry ny fampitomboana ny isan'ny mpampiasa natokana ho an'ny lalao, Izy io koa dia nanao azy ho an'ny mpampiasa mpampiasa hafa toy ny vondrona fianarana, kilasy fandihizana, klioba famakiana ary fivoriana nomerika hafa.
Andao lazaina fa raha i Zoom no mpanjaka tamin'ny antso an-tsary, Discord dia natao ho an'ireo vondrona izay ankoatry ny feo na horonan-tsary amin'ny alàlan'ny antso, ilaina ny chat mba hizara rohy, lahatsoratra, eritreritra, fivoriana, resaka ary maro hafa.
Ho an'i Microsoft dia azo atao ny manome lanja bebe kokoa ny tolotra Gamer Pass, satria manana Microsoft Teams ho an'ny matihanina, Skype amin'ny fampiasana antso an-tsary sy Discord bebe kokoa amin'ny lalao; Na dia, noho ny fahombiazan'ny fampiharana aza, dia hahagaga antsika izany amin'ny taona ho avy miaraka amin'ireo mpampiasa maro karazana fialam-boly hanatevin-daharana azy.
Miandry izao raha ny varotra mifarana amin'ny fiafarana tsara ho an'ny Discord sy Microsoft ary afaka miresaka isika fa efa namidy $ 10.000 miliara taorinan'ny fividianan'ity farany ny Zenimax Media Inc $ 7.500 miliara (tompon'ny Elder Scrolls sy Doom, na Bethesda Softworks).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Saika hividy Discord amin'ny vidiny 10.000 miliara dolara i Microsoft
Ny fampiharana 10 tsara indrindra hampiadiana horonantsary amin'ny Android
Cubot KingKong 5 Pro, finday misy Android 11 natao ho an'ny tontolo mitaky be fitakiana